OnePlus 7 Pro: atụmatụ, nkọwa, ọnụahịa na nnweta | Gam akporosis
Anyị ekwuola gbasara ya OnePlus 7, ụdị ọkọlọtọ nke ọhụụ ọhụrụ nke onye nrụpụta China nke nwekwara Pro dị iche iche, nke bụ nke anyị ga-ekwu maka esote.
El OnePlus 7 Pro Ọ bụ ọnụ dị elu karịa nke ekwuburu na nke ahụ nwekwara nke kachasị mma, ma na azụ ya ma n'ihu ya. N'otu oge ahụ, ọ na-eme ka ụfọdụ ngalaba dịkwuo mma, dị ka ihuenyo, nke, na-enweghị obi abụọ, na-eme ya a nhọrọ kachasị mma maka ndị na-achọ ihe kachasị mma kachasị mma n'ụzọ ọ bụla.
1 OnePlus 7 Pro Atụmatụ na nkọwa
OnePlus 7 Pro Atụmatụ na nkọwa
Dị ka ọ dị na OnePlus 7, anyị ga-amalite site na ikpughe ihe niile gbasara ihuenyo OnePlus 7 Pro, nke, dị ka ekwuru, abịa na a ugboro ole nke 90 Hz, ihe na-enye ahụmịhe ka mma mgbe ị na-agafe na menu, dị ka otu ụlọ ọrụ ahụ si kwuo.
Na nke a anyị ga-agbakwunye 'Ọnọdụ Night 2.0', ọrụ nke na-agbanwe ma belata nchapụta ihuenyo AMOLED nke na-akwadebe ihe ruru 0.27 nits. Nke a ga - echedo ọhụụ nke onye na - eyi uwe n’enweghị ọnọdụ, dịka n’abalị.
Ugbu a, na-ekwu maka nkọwa nke ihuenyo ahụ, anyị nwere 'Fluid AMOLED' teknụzụ na 6.67 sentimita asatọ, nke karịrị nke nke OnePlus 7. Nke a, dị ka mmụba dị ịrịba ama, nwere mkpebi dị elu karị, nke bụ QuadHD + nke pikselụ 3,120 x 1,440, na akụkụ 19.5: 9 dị egwu. O nwekwara akụkụ gbara mkpị ma jiri uru Corning Gorilla Glass na-enye. O nwekwara njupụta pixel nke 516 dpi.
El Snapdragon 855 ọ dịkwa na ihe nlereanya a, yana ihe dị ka 6, 8 ma ọ bụ ezigbo 12 GB nke Ram, dabere na ụdị ị nwere. Otú ọ dị, nhazi ọnọdụ nchekwa dị n'ime ya ka dị na anyị na-ahụ na OnePlus 7, nke bụ 128 na 256 GB, UFS 3.1 teknụzụ.
Autonomy bu otu ihe siri ikes, dị ka ọ nwere ikike 4,000 mAh nke na-erite uru nke 30 W Warp Charge ngwa ngwa na-ebu teknụzụ, nke nwere ike ịkwanye ngwaọrụ ngwa ngwa karịa ihe enyere na ụdị ọkọlọtọ.
Ngalaba foto ya nwere igwefoto nwere okpukpu atọ, kama nke okpukpu abụọ, dị ka ọ na-eme na OnePlus 7. Nke a mejupụtara Sony IMX586 isi ihe mmetụta nke 48 MP (f / 1.7) na oghere 6P na OIS na EIS, ihe mmetụta 8 MP telephoto (f / 2.4) ) iji nye mbugharị anya 3x na oghere 16-2.2 MP (f / 117) oghere anya. Usoro a na-akwado ndekọ 4K na okpokoro 60 kwa nkeji, nwere ọkụ ọkụ abụọ, nwere ogologo oge sitere na 11 mm ruo 78 mm, nwere teknụzụ 'Pixel Binning' ma tinye ya na oghere elekere 7.
Ka ọ dịgodị, maka selfies ọ na-etuzi igwefoto gbapụrụ agbapụ 471 MP Sony IMX16 nwere oghere f / 2.0 na nkwado HDR, nke bụ otu ihe ahụ dị ka ihe atụ mbụ, mana ọ bụghị site na ọkwa. Enwere ike ịrụ ọrụ nke a ruo oge 300,000 na-enweghị nhụjuanya ọ bụla, ụlọ ọrụ ahụ na-akọwa.
N'aka nke ọzọ, jikọtara ọtụtụ atụmatụ na nkọwa nke OnePlus 7, dịka ndị na-ekwu okwu stereo, nkwado Dolby Atmos, na sistemụ arụmọrụ A gam akporo n'okpuru nsụgharị ọhụrụ nke OxygenOS,
IKIRU AMOLED 6.67 »QuadHD + 3.120 x 1.440 pikselụ (516 dpi) / 19.5: 9 / Corning ozodimgba iko
Ndị isi Azụ: Sony IMX586 48 MP (f / 1.7) 7 µm 0.8P lens na OIS + 8MP (f / 2.4) na mbugharị anya 3x + 16 MP (f / 2.2) 117º obosara. Ugboro abụọ ikanam flash / Ihu: Sony IMX471 16 MP (f / 2.0) 1 .m
UMUAKA 4.000 mAh na 30-watt Warp Charge ngwa ngwa (5 volts / 6 amps)
OS Achịcha 9 Akara n'okpuru OxygenOS
Atụmatụ ndị ọzọ Na nyocha ihuenyo mkpịsị aka / Nchọpụta ihu / USB-C (USB 3.0 Gen 1) / ndị na-ekwu okwu stereo / nkagbu Noise / Nkwado maka Dolby Atmos / SBAS / Alert Slider
The OnePlus 7 Pro na-abịa na RAM dị iche iche na nhọrọ nchekwa dị n’ime. E nwere ụdị anọ dị iche iche nke ihe nlere a, ha niile ga-erekwa n'otu ụbọchị, nke bụ May 21, ma e wezụga 8GB RAM na 256GB ROM dị iche iche, nke a ga-ewepụta na June.
Nke a bụ ọnụahịa ha:
OnePlus 7 Pro (6/128 GB) Grey na-enyo enyo: Euro 709.
OnePlus 7 Pro (8/256 GB) Mirror Grey na Nebula Blue: Euro 759.
OnePlus 7 Pro (8/256 GB) almọnd: Euro 759.
OnePlus 7 Pro (12/256 GB) Nebula Blue: Euro 829.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus 7 Pro: ọkọlọtọ ọhụrụ nke na-abịa na ihe niile wee bịarute iji dọta uche
A gam akporo 9 achịcha dị ugbu a maka Galaxy Tab S4